ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ PSA အောက်ဆီဂျင်နှင့်နိုက်ထရိုဂျင်စက်ရုံ Air Separation Unit - အောက်စီဂျင်ထုတ်လုပ်စက်
ကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်များ ၁： အလိုအလျောက် Rotary Air Compressor ။ 2： စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအလွန်နည်းသည်။3air ရေကိုလေဖိအားအဖြစ်သိမ်းဆည်းသည်။ ASME စံသတ်မှတ်ချက်များအရ ၄： ၁၀၀% သံမဏိဆောက်လုပ်ရေးကော်လံ။5medical ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ / ဆေးရုံသုံးရန်မြင့်မားသောသန့်စင်သောအောက်စီဂျင်။ 6： Skid တပ်ဆင်ထားသည့်ဗားရှင်း (အခြေခံအုတ်မြစ်မရှိပါ) 7： လျင်မြန်စွာစတင်ပါနှင့်အချိန်ကိုပိတ်ပါ။ 8 liquid အောက်စီဂျင်အရည်ကိုအောက်စီဂျင်အရည်ဖြင့်အောက်စီဂျင်ဖြည့်သည်။ အသုံးပြုသောနေရာများအောက်ဆီဂျင်၊ နိုက်ထရိုဂျင်၊ အာဂွန်နှင့်အခြားရှားပါးဓာတ်ငွေ့များထုတ်လုပ်ခြင်း ...
ကုန်ပစ္စည်း၏အားသာချက်များ ၁။ မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်မှုကြောင့်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ ရိုးရှင်းပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုအတွက် ၂။ အလိုအလျောက်စနစ်။ အဆင့်မြင့်သန့်ရှင်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှထွက်လာသောဓာတ်ငွေ့များရရှိမှု။ 4. မည်သည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းအသုံးပြုရန်သိမ်းဆည်းထားရန်အရည်အဆင့်အတွက်ထုတ်ကုန်များ၏ရရှိမှုအားဖြင့်အာမခံ။ 5.Low စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု။ 6.Short အချိန်ဖြန့်ဝေ။ အသုံးပြုမှုနယ်ပယ်များအောက်စီဂျင်၊ နိုက်ထရိုဂျင်၊ အာဂွန်နှင့်အခြားလေထုခွဲခြားယူနစ်မှထုတ်လုပ်သောရှားပါးဓာတ်ငွေ့ ...
ကုန်ပစ္စည်း၏အားသာချက်များကျွန်ုပ်တို့သည်အကောင်းဆုံးသောပစ္စည်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ဆလင်ဒါဖြည့်တင်းမှုအတွက်အောက်စီဂျင်စက်ရုံကိုတည်ဆောက်သည်။ ကျနော်တို့ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်နှင့်ဒေသခံအခြေအနေများအရသိရသည်စက်ရုံများကိုစိတ်ကြိုက်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စနစ်များကိုအကောင်းဆုံးနှင့်အကျိုးရှိစွာပေါင်းစပ်ပေးသောစက်မှုဓာတ်ငွေ့ဈေးကွက်တွင်ထင်ရှားသည်။ အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖြစ်သဖြင့်အပင်များသည်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်မှုမရှိနိုင်သကဲ့သို့ဝေးလံခေါင်သီသောရောဂါရှာဖွေရေးပြtroublနာကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ တိကျသောဒီဇိုင်းသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေပြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
ကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်များကျွန်ုပ်တို့သည်အောက်စီဂျင်အရည်အပင်များထုတ်လုပ်ရာတွင်အလွန်ကောင်းမွန်သောအင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုကြောင့်လူသိများသော cryogenic distillation နည်းပညာကိုအခြေခံထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျသောဒီဇိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ငွေ့စနစ်များကိုစိတ်ချရသော၊ အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အောက်စီဂျင်အရည်များသည်အနည်းဆုံးပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သောအချိန်ကြာမြင့်စွာတည်ရှိသည်။ တင်းကျပ်သောအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုအတိုင်းအတာများနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏ ...
ကုန်ပစ္စည်း၏အားသာချက်များ ၁။ မော်ဂျူလာဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်မှုကြောင့်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်း။ ရိုးရှင်းပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုအတွက် ၂။ အလိုအလျောက်စနစ်။ အဆင့်မြင့်သန့်ရှင်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှထွက်လာသောဓာတ်ငွေ့များရရှိမှု။ 4. မည်သည့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစစ်ဆင်ရေးကာလအတွင်းအသုံးပြုရန်သိမ်းဆည်းထားရန်အရည်အဆင့်အတွက်ထုတ်ကုန်များ၏ရရှိမှုအားဖြင့်အာမခံ။ 5.Low စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု။ 6.Short အချိန်ဖြန့်ဝေ။ အသုံးပြုမှုနယ်ပယ်အောက်စီဂျင်၊ နိုက်ထရိုဂျင်၊ အာဂွန်နှင့်လေထုခွဲခြင်းမှထုတ်လုပ်သောအခြားရှားပါးသောဓာတ်ငွေ့ ...
ကုန်ပစ္စည်းအားသာချက်များ ၁။ ဤစက်ရုံ၏ဒီဇိုင်းနိယာမမှာလုံခြုံမှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်လွယ်ကူစွာလည်ပတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ နည်းပညာသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဦး ဆောင်နေသည်။ A: ၀ ယ်သူသည်အရည်အမြောက်အများထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုသက်သာစေရန်လေဖိအားအလယ်အလတ်ဖိအားကိုပြန်လည်ပြုပြင်သည်။ B: ကျွန်ုပ်တို့သည်လေထုတွန်းခြင်းနှင့်မြင့်မားသော, အနိမ့်သွေးဆောင်ခြင်းကိုမွေးစား။ ပါဝါစားသုံးမှုကယ်ဖို့တိုးချဲ့လုပ်ငန်းစဉ်။ ၂။ DCS ကွန်ပျူတာထိန်းချုပ်မှုကိုလက်ခံသည်။
ကုန်ပစ္စည်း၏အားသာချက်များကျွန်ုပ်တို့သည်တိကျသောလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကွဲပြားခြားနားသောထုပ်ပိုးမှုနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။ ထုပ်ပိုးထားသောအိတ်များနှင့်သစ်သားသေတ္တာများသည်ရေစိုခံ၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်ထိတ်လန့်မှုကိုကာကွယ်ရန်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ပစ္စည်းကိရိယာအားလုံးသည်ဖြန့်ဝေပြီးနောက်တွင်ပြီးပြည့်စုံသောအခြေအနေတွင်ရှိနေစေရန်ဖြစ်သည်။ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအပိုင်းတွင်ကုမ္ပဏီတွင်သိုလှောင်ရုံကြီးတစ်ခုနှင့်သီးသန့်ကိုယ်ပိုင်တန်ချိန် ၈၀၀ တန်ဆိပ်ခံတံတားရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တူးမြောင်းမှတစ်ဆင့်ကြီးမားသောတန်ချိန် ၅၀၀ ကိုရှန်ဟိုင်းဆိပ်ကမ်းသို့တိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ ငါတို့မှာလည်းအများကြီးရှိတယ်။
သတ်မှတ်ချက်အထွက် (Nm³ / h) ထိရောက်သောဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု (Nm³ / h) လေသန့်ရှင်းရေးစနစ် ORO-551.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်အောက်စီဂျင်စက်ရုံနှင့်နိုက်ထရိုဂျင်ကိုထုတ်လုပ်ပြီးတင်ပို့သည်။ နောက်ဆုံးပေါ် cryogenic distillatio နှင့်အတူဆလင်ဒါဖြည့်များအတွက်စက်ရုံ ...
သတ်မှတ်ချက်အထွက် (Nm³ / h) ထိရောက်သောဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု (Nm³ / h) လေသန့်ရှင်းရေးစနစ် ORO-551.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 အောက်စီဂျင်သည်လူ့ဘ ၀ ကိုထောက်ပံ့ရန်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဓာတ်ငွေ့ဖြစ်သည်။ မြေကြီး၊ ဆေးရုံအထူးပြု၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအောက်စီဂျင်သည်အလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။
သတ်မှတ်ချက်အထွက် (Nm³ / h) ထိရောက်သောဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု (Nm³ / h) လေသန့်ရှင်းရေးစနစ် ORO-551.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးပေါ် PSA ကို အသုံးပြု၍ PSA အောက်စီဂျင်စက်ရုံကိုထုတ်လုပ်သည်။ ဖိအား Swing Adsorption) နည်းပညာ။ PSA အောက်စီဂျင်စက်ရုံကို ဦး ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။
သတ်မှတ်ချက်အထွက် (Nm³ / h) ထိရောက်သောဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု (Nm³ / h) လေသန့်ရှင်းရေးစနစ် ORO-551.25 KJ-1.2 ORO-10 10 2.5 KJ-3 ORO-20 20 5.0 KJ-6 ORO-40 40 10 KJ-10 ORO-60 60 15 KJ-15 ORO-80 80 20 KJ-20 ORO-100 100 25 KJ-30 ORO-150 150 38 KJ-40 ORO-200 200 50 KJ-50 1: အောက်စီဂျင်အရောင်ချွတ်ခြင်းနှင့်စက္ကူနှင့်ပျော့ဖတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် delignification 2: မီးဖိုသန့်စင်ရန်ဖန်ထည်စက်ရုံ ၃: သတ္တုဗေဒလုပ်ငန်း ...
သတ်မှတ်ထားသောထုတ်ကုန် (Nm³ / h) ထိရောက်သောဓာတ်ငွေ့သုံးစွဲမှု (Nm³ / h) လေသန့်ရှင်းရေးစနစ်တင်သွင်းသူများ caliber ORN-5A50.76 KJ-1 DN25 DN15 ORN-10A 10 1.73 KJ-2 DN25 DN15 ORN-20A 20 3.5 KJ-6 DN40 DN15 ORN-30A 30 ၅.၃ KJ-6 DN40 DN25 ORN-40A 407KJ-10 DN50 DN25 ORN-50A 50 8.6 KJ-10 DN50 DN25 ORN-60A 60 10.4 KJ-12 DN50 DN32 ORN-80A 80 13.7 KJ-20 DN65 DN40 ORN-100A 100 17.5 ...
PSA အောက်စီဂျင်မီးစက်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်
PSA အောက်စီဂျင်မီးစက်သည်စုပ်ယူသောစည်အဖြစ် zeolite မော်လီကျူးဆန်ခါကိုအသုံးပြုသည်။ အောက်ဆီဂျင်ကိုစုပ်ယူရန်နှင့်လေမှအောက်ဆီဂျင်ကိုစုပ်ယူရန်ဖိအားထိစိမ့်ဝင်ခြင်းနှင့်ဖြိုခွဲခြင်း desorption ၏နိယာမကိုအသုံးပြုသည်။ O2 နှင့် N2 ကို zeolite molecular sieve ဖြင့်ခွဲခြားခြင်း ...
ကိုရီးယားသမ္မတဝမ်သည် Yin ၌ကျွန်ုပ်၏ယူနစ် Ding Zong နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်
တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်းဂျီအန်သည်အနာဂတ်၌ပိုမိုကောင်းမွန်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပိုမိုရရှိရန်မျှော်လင့်လျက်ကျွန်ုပ်တို့၏ယူနစ်မှ Mr. Ding နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ 。၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အပေါ်ယုံကြည်မှုရှိခြင်း လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်။ ...
ကျွန်ုပ်တို့၏အောက်စီဂျင် / နိုက်ထရိုဂျင်စက်ဒီဇိုင်း
အောက်စီဂျင် / နိုက်ထရိုဂျင်စက်ရုံ၏ဒီဇိုင်းသည်အနိမ့်နှင့်အလယ်အလတ်ရှိသောဖိအားသံသရာအပေါ် အခြေခံ၍ လေအရည်၏အရည်ကိုအခြေခံသည်။ လေထုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကော်လံတွင်ခေတ်မီ BOSCHI ဖြည်းညှင်းစွာသက်ရောက်သည့်ဗန်းများ၊ multipass exchanger & condensor များရှိသည်။
"Intellect အစီရင်ခံစာသည် ၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၆ ခုနှစ်အထိလေထုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်စျေးကွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ခန့်မှန်းခြင်းဆိုင်ရာနောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာကိုတင်ပြသည်။ အစီရင်ခံစာသည်အရေးကြီးသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးပြီးဖောက်သည်များကိုအသေးစိတ်အစီရင်ခံစာများမှတစ်ဆင့်အပြိုင်အဆိုင်အားသာချက်ကိုပေးသည်။ ထို့အပြင် ...
DBMR သည် "Air Separation Equipment Market" ဟုခေါ်သည့်အစီရင်ခံစာအသစ်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားသည်။ ဤအချက်အလက်ဇယားများကိုစာမျက်နှာနှင့်တစ်လျှောက်ပြန့်နှံ့ပြီးအသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်လွယ်ကူသော "chat and graphs" ဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ လေထုခွဲခြားခြင်း ...